I-Cozy T2, ilungiswe ngokupheleleyo, i-Pied de pistes Pwagen - I-Airbnb
I-Cozy T2, ilungiswe ngokupheleleyo, i-Pied de pistes Pwagen
Le flethi okanye indlu ekwicomplex ilungiswe ngokugqibeleleyo, isebenza kakuhle, ikumbindi wePyrenees yaseCatalan ukuze ihlale ezintabeni kummandla weFransi. Liquka igumbi lokulala elahlukileyo (iibhedi ezimbini ezilala umntu omnye okanye ibhedi elala abantu ababini enye okanye ibhedi yeambrela yosana), ikhitshi elinento yonke, isofa enokutshintshwa ibe yibhedi enkulu nendawo yokugcina izinto ezininzi. Uza konwabela ne-balcony yayo xa ubona imithambeko kunye ne-resort kunye nokuzonwabisa kwayo ehlotyeni nasebusika.
Ukususela kwingxaki yezempilo, amanyathelo okubulala iintsholongwane nazo zonke izixhobo ezifunekayo ziyafumaneka ukuze kuqinisekiswe ukuba uhlala ukhuselekile.
Iflethi ekumgangatho wesithathu enelifti, ikwenye yeendawo zokuhlala eziphakathi kwi-resort, kukho indawo yokupaka ngasemva (hayi eyimfihlo) kunye ne-ski locker enendawo yokutshixa umphantsi. Ibhalkhoni enkulu eyi-8 m2 iyaxatyiswa kakhulu xa imozulu ishushu kwaye ijongene ne-resort kunye neziganeko zayo ezahlukeneyo.
Indawo yokuhlala, enendawo engaphandle kwebhalkhoni eyi-25 m2, iquka igumbi lokulala elahlukileyo elineebhedi eziyi-2 ezidityanisiweyo (mhlawumbi ibhedi enye okanye ezimbini okanye ibhedi elala abantu ababini enye), kunye negumbi lokuhlala elinesofa eyibhedi (ilala abantu ababini kwi-160). Ibhedi yosana kunye nomatrasi ziyafumaneka nakwiintsapho ezinabantwana, kunye nebhotile efudumeleyo kunye nompheki wosana.
Ikhitshi linezinto zasekhitshini, i-microwave, ioveni encinci, i-raclette grill, i-toaster neketile. Iflethi isebenza kakuhle kakhulu, inezinto ezininzi zokuyigcina, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba impahla nowokomisa iitawuli zombane onomatshini wokomisa iinwele. Isixhobo sokomisa iinwele siyafumaneka nakwigumbi lokuhlambela elineshawa. Iiduvethi, imiqamelo, iingubo neemethi zokuhlamba zilahlwayo zakho kunye nazo zonke izinto ezisisiseko zendlu, indlu yangasese kunye nokutya. KWELINYE ICALA, IBHEDI NEZINTO ZEBHEDI ZOKUHLAMBA AZIFUMANEKI KODWA ZISENOKUXELWA KWANGAPHAMBILI NANGEMALI EYONGEZELELEKILEYO. Okokugqibela, ndiza kukucela ukuba ucoce iflethi okanye indlu ekwicomplex uze uyicoce kakuhle xa uphuma. Ukuba awufuni ukucoca, ndingaba nenkampani eyongezelelekileyo eyi- € 35 (ixabiso elifanayo ukuba ukucoca akugqitywanga!)
4.84 · Izimvo eziyi-201
I-Bolquère Pyrénées 2000 resort yamkela ngokukhethekileyo kwaye imnandi, yaziwa ngokuba nelanga elihle kunye neendawo eziphakamileyo ezingaphezu kwe-2200 m. Ime embindini wePaki Yemvelo yeNgingqi yePyrenees yaseCatalan, kunye neCerdagne, kufutshane neNtaba yeCarlit, iLac des Bouillouses kunye nomda weSpeyin. Inikezela ngamathuba amaninzi okunyuka intaba kunye nemisebenzi eyahlukahlukeneyo...
Ungafika nanini na ukususela ngo-3 emva kwemini, kwaye nokuba andikho esikhululweni, ndikulahlwayo ngefowuni okanye ngomyalezo kuyo nayiphi na inkcazelo yonke imihla.
Inombolo yomthetho: 066.020.21D0002
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bolquère